Shir looga hadlayo sameynta Sharciga Abuurka Beeraha oo Maanta ka furmay Magaalada Muqdisho+Sawirro – Radio Muqdisho
Shir looga hadlayo sameynta Sharciga Abuurka Beeraha oo Maanta ka furmay Magaalada Muqdisho+Sawirro
Waxaa ka qeyb galay Shirkan oo ay soo agaasintay Wasaaradda Beeraha iyo Arrimaha Abuurka Qubaro dhanka Beeraha, Xubno matalaya Maamul Goboleedyada Dalka iyo marti Sharaf kale ayaa waxaa looga hadlayey dhowr arrimood oo ay kamid tahay sidda loo sameyn karo Sharciga Abuurka ee Soomaaliya iyo qaabka looga faa’iideysan karo wax soo saarka Beeraha.
Wasiir ku xigeenka Wasaaradda Beeraha Xaamud Cali Xasan ayaa sheegay in Sharcigaan Faa’iidooyin badan Soomaaliya u leeyahay hadii lasameeyo Muhiimad gaar ahna siinayaan.
“Waxaa meesha ka baxay sharciyo badan oo dalka muhiim u ahaa markii Dowladii dhexe meesha ka baxday, hadda waxaan ku dadaaleynaa sidii aan u heli laheyn Sharciga Beeraha Soomaaliya”
Xildhibaan Zakariye Xaaji Maxamuud oo kamida Gudiga Qeyraadka ee Golaha Shacabka ayaa waxaa uu tilmaamay in Sharciga Beeraha aad loogu baahan yahay.
Wasiirka Wasaaradda Beeraha iyo Abuurk Dr Saciid Xuseen Ciid ayaa waxaa uu tilmaamay in Sharcigaan qeyb kayahay Sharciyo badan oo la-doonayo in Wasaaraddu dib u soo celiso.
“Waxaan rabnaa in aan soo celino Sharciyo badan kana qeyb ayuu ka yahay meel wanaagsan ayuuna hadda noo marayaa”
Seddexda maalin ee soo socota ayey ka qayb galayaasha Shirkaan ka doodayaan sidii loo dhameystiri lahaa Sharigaan si-loo horgeeyo Golaha fulinta iyo Sharci dajinta.
W/D Cali Axmed
Madaxweyne Farmaajo oo Saraakiisha Ciidamada Xoogga dalka kala hadlay dar dar gelinta dagaalka ka dhanka ah Al-Shabaab “SAWIRRO”
Madaxweynaha Jubbaland oo qaabilay madaxa Hey’adda Qaxootiga Adduunka ee UNHCR “SAWIRRO”
Madaxweynaha Jubbaland oo qaabilay madaxa Hey’adda Qaxootiga Adduunka ee UNHCR "SAWIRRO"